कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? याे तरिका अपनाउनुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
शहरीकरणसँगै प्रदुषित हावा र पानीको पहिलो शिकार तपाईं हाम्रो कपाल हुने गर्दछ । यसले कपालमा अनेकन् समस्या थपिएका छन् । यीमध्ये एउटा हो कपाल खस्ने समस्या ।
कपाल कोर्दा काईंयोँमा कपालको मुठा नै आउने गर्छ कहिले काहिँ । पुरुषहरुमा पनि कपाल खसेर हैरान हुने कम्ती छैनन् ।
– राति मेथी भिजाउने, बिहान यसलाई राम्रोसँग पिस्ने र कपालको जरासम्म लाग्नेगरी टाउकोमा दल्ने । ४० मिनेटपछि कपाल धुने । यसो गर्दा कपाल झर्ने क्रम रोकिन्छ ।
Don't Miss it याद गर्नुहाेस् ! यस्ताे भयाे भने क्यान्सर हुनसक्छ
Up Next उमेर अनुसार नुनसेवन, कुन उमेरमा कति गर्ने ?